Mianara fiteny na aiza na aiza ary amin'ny hafainganam-pandehanao manokana miaraka amin'ny italki | iPhone News
Ignatius Room | 17/05/2022 08:01 | Fampiharana iPhone, App store
Tsy misy olona afaka mandà izany Ny teny anglisy no fiteny manerana izao rehetra izao, fiteny iray ahafahanao mahazo ny tenanao saika any amin'ny firenena rehetra eran-tany, na dia tsy fiteniny ofisialy aza izany. Na teny anglisy io na fiteny hafa, ny fomba tsara indrindra hianarana azy io, na ny fanoratana na ny fitenenana, dia ny fanazaran-tena. Tena tsara ny mijery andian-dahatsoratra amin'ny dikan-teny tany am-boalohany.
Tena tsara koa ny mamaky boky na lahatsoratra amin'ny teny anglisy. SAINGY Inona no mitranga rehefa tsy maintsy miteny izany ianao? Zavatra roa: tsy hainao ny maneho hevitra ary mitovy kokoa amin'ny an'ny Minion ny fanononanao noho ny fiteny tianao holazaina.
Ny vahaolana mora indrindra dia ny fampiasana fampiharana toy ny italki. italki dia tsy iray amin'ireo fampiharana maro efa misy ao amin'ny magazay ary manolotra fanazaran-tena tsotra amin'ny fiteny hafa, fa kosa dia fampiharana manolotra fampianarana fiteny miaraka amin'ireo mpampianatra teratany ao anatin'ny findainao. Raha ny marina dia nasehon’izy ireo izany 19 ora miaraka amin'ny italki dia manome fahalalana mitovy amin'ny semester iray manontolo amin'ny oniversite, satria manolotra resadresaka tena izy amin'ny mpampianatra teratany ny fampiharana mba hahafahan'izay mianatra fiteny iray miroboka amin'ny fampiasana azy.
Mianara fiteny foana miaraka amin'ny mpampianatra teratany Ny safidy tsara indrindra, satria mamela antsika hianatra hiteny tsara sy hanitsy ny mety ho fahadisoana fanononana ananantsika.
Ny akademia fiteny mitaky fanoloran-tena amin'ny fanatrehana sy ny fandaharam-potoana izay, arakaraka ny asantsika, dia mety tsy ho vitantsika. Ny vahaolana indray dia hita ao amin'ny italki.
1 Inona no atolotry ny app italki antsika
1.1 Mianara miaraka amin'ny asa mahafeno fepetra
1.2 Fahalalahan'ny fandaharam-potoana
1.3 Mifanaraka amin'ny paosy rehetra
1.4 Antso an-tsary manokana
1.5 Kilasy amin'ny fiteny 150 mahery
1.6 Tsy manomboka amin'ny voalohany ianao
1.7 fanomanana fanadinana
1.8 Misy votoaty midadasika
1.9 Mahay fiteny ve ianao? Mahazoa vola fanampiny
2 Ahoana ny fiasan'i italki
Inona no atolotry ny app italki antsika
Raha efa nandalo sekolin'ny fiteny ianao ka nijanona tsy nandeha satria tsy tianao ny metodôlôjia, tsy nahafinaritra ny kilasy, ambany loatra na avo loatra ny haavon'ny fahalalanao ... miaraka amin'i italki tsy ho hitanao izany olana izany.
Mianara miaraka amin'ny asa mahafeno fepetra
italki dia manome ny mpampiasa azy rehetra mpampianatra 30.000 mahery azo isafidianana. Ohatra, ao anatin'ireo mpampianatra miteny anglisy dia azonao atao ny misafidy izay miteny anglisy anglisy na anglisy amerikana mba hampifantoka ny fianaranao amin'ny firenena kasainao hampivelatra ny fahalalanao.
Miaraka amin'ireo mpampianatra mahafeno fepetra azo alaina amin'ny italki dia azonao atao mianatra fiteny rehetra hatramin'ny voalohany, amin’ny alalan’ireo ambaratongam-pianarana samihafa nomanin’izy ireo.
Manana mpampianatra ihany koa izahay hanatsara ny fanononana, ny manitatra voambolana sy fanononana amin'ny faritra sasany (asa, fivoriana, fitsangatsanganana, fotoana malalaka...) na miresaha fotsiny momba ny lohahevitra rehetra mba hitazonana ny fahalalantsika ny fiteny.
Ny iray amin'ireo olana atrehin'ny mpampiasa maro izay te hianatra fiteny dia ny olana amin'ny fahafahany manambatra kilasy amin'ny asa, indrindra rehefa mifandimby na mandany andro any amin'ny birao izy ireo.
miaraka amin'ny italki ianao no mametraka ny fandaharam-potoana ary ny fotoana tianao hanokanana isan'andro na isan-kerinandro hianarana fiteny vaovao na hanatsarana ny fahalalana efa anananao.
Safidio ny faharetan'ny kilasy (30, 45, 60 ary 90 minitra) mba hanitsiana azy amin'ny fotoana malalaka anananao (fotoana antoandro, rehefa mandeha ny alika ianao, misotro kafe ...).
Mifanaraka amin'ny paosy rehetra
Amin'ny famelana antsika hisafidy ny fandaharam-potoana mifanaraka amin'ny fotoana malalaka ananantsika, dia afaka ihany koa manokana tetibola isam-bolana hampiasa vola amin'ny fianarana fiteny vaovao na fanatsarana ny haavontsika. Tsy mila mandoa famandrihana isam-bolana ianao, mandoa ny kilasy azonao.
Samy manana ny sarany ny mpampianatra tsirairay, ny sarany izay miovaova manomboka amin'ny latsaky ny 10 euros ho an'ny mpampianatra mahafeno fepetra ka hatramin'ny latsaky ny 5 euros ho an'ny mpampianatra. Ny vidiny dia miankina amin'ny faharetan'ny kilasy sy ny karazana fahalalana atolony antsika.
Antso an-tsary manokana
miaraka amin'ny italki, tsirairay ny kilasy ary atao amin'ny alalan'ny antso an-tsary. Amin'izany fomba izany, dia afaka manohy mianatra fiteny iray na aiza na aiza isika, na dia tsara foana aza ny manao izany amin'ny toerana tsy misy fanelingelenana.
Afaka misafidy ny sehatra mifanaraka amin'ny filantsika koa isika Skype, Zoom, Kilasy na fampiharana antso video hafa.
Kilasy amin'ny fiteny 150 mahery
Miaraka amin'ny italki dia afaka mianatra fiteny 150 mahery. italki dia manolotra fiteny maro isan-karazany hianarana, izay ahafahantsika manome fahafaham-po ny fahalianantsika amin'ny fiteny hafa, mianatra ny fototry ny fiteny iray izay tsy fantatsika tanteraka, tonga lafatra ny haavon'ny fiteny iray amin'ny faritra sasany. ..
Tsy manomboka amin'ny voalohany ianao
Alohan'ny hanombohan'ny kilasy dia jereo ny haavon'ny fahalalana ny fiteny tianao hianarana. Hadalana ny manomboka amin'ny fiteny fototra indrindra, rehefa mamela anao hanao resaka mivaingana ny fahalalanao, na dia ratsy aza ny fanononanao sy ny fahatakaranao.
Ny anaram-boninahitra tsara indrindra dia ny traikefa. Tsara ny lohateny aseho amin'ny resume, fa ny fomba tsara indrindra hanehoana izany dia ny fitenenana sy fanoratana ilay fiteny.
Raha tianao izany mahazo lohateny ampiana amin'ny resume anao, miaraka amin'ny italki dia hanana ny fanampiana ilaina hahazoana azy mora foana ianao noho ny programa samihafa atolony momba izany.
Misy votoaty midadasika
Ho fanampin'ny fanohanana kilasy amin'ny antso an-tsary tsirairay, italki dia manome ny mpampiasa azy votoaty marobe isan-karazany toy ny podcast, lohahevitra resaka, fanazaran-tena, fanontaniana...
Raha te hianatra sy tsy tapaka ianao, dia mianara fiteny vaovao na tonga lafatra ny fahalalana efa anananao Rivotra be ny ho avy.
Mahay fiteny ve ianao? Mahazoa vola fanampiny
Raha mahay fiteny ianao ary te hahazo vola fanampiny lasa mpampianatra. italki dia mametraka eo am-pelatananao ny sehatra ilainao hampianarana fiteny nefa tsy miala ao an-trano, izay ahafahanao mametraka ny sarany, manana ny fandaharam-potoananao manokana, mamolavola ny kilasinao...
Ahoana ny fiasan'i italki
Raha te hahalala mianatra bebe kokoa momba ny fomba fiasan'i italki, afaka mitsidika ny tranokalany ianao, izay ahafahanao:
jereo fohy fanolorana ireo mpampianatra misy.
El vidin'ny kilasy ny tsirairay amin'ireo mpampianatra misy.
Apetraho ny haavon'ny fiteninao mitady ny mpampianatra izay hanampy anao hianatra ianao.
Mikasika ny fisian'ny, azonao atao misintona italki amin'ny ios, miaraka amin'ny iOS 11 no kinova kely indrindra takian'ny fitaovana. Fa koa, azo alaina ho an'ny Mac ihany koa miaraka amin'ny processeur Apple M1 na ambony.
Azo ampiasaina koa italki ao amin'ny Google Play Store amin'ny alàlan'ny rohy voalaza mba hahafahanao mankafy izany amin'ny fitaovana Android anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Mianara fiteny na aiza na aiza ary amin'ny fombanao manokana miaraka amin'ny italki